Qalabka | November 2019
Ugu Weyn Ee Qalabka
Sida loo doorto majarafad baraf ah: Talooyin iyo xirfado
Iyadoo bilawga jiilaalka, badanaa waa lagama maarmaan in la nadiifiyo barafka: deyrka guryaha gaarka loo leeyahay, meel u dhow garaashka, xagaaga xagaaga, oo ku yaal dukaanka hortiisa. Laakiin haddii majarafadda barafku ay qalad tahay, nidaamkani wuxuu noqon karaa caqabad dhab ah adiga. Sidaa daraadeed, waxay u qalantaa habab badan oo masuuliyad ah ee doorashooyinka barafka, iyo qodobkan ayaa kaa caawin doona arrintan.
Sida loo isticmaalo oo loo daryeelo nadiifinta gacanta
Dadka intooda badan ku hawlan hawlaha beeraha waxay isticmaalaan nadiifinta gacanta. Waxaa loo adeegsanayaa cawska cawska, xayawaanka xoolaha, qashinka cawska. Ammaanka iyo adeegga muddada dheer, waa lagama maarmaan in la ogaado sida loo xajiyo iyo daryeelka loo hayo gacanta gacanta. Qalabka iyo qaybaha ugu muhiimsan Qalabkani wuxuu ka kooban yahay: midida mindi, mindhicirka, gacanta, boobka iyo giraanta.
Waxaan dooranaynaa shay-bixiye: shuruudaha xulashada
Baahida loo qabo in la fuliyo shaqooyinka yaryar ee guriga ayaa badanaa soo baxa, iyo qalabka korantada ee korantada, kuwaas oo had iyo jeer la socda, waxay fududeeyaan geedi socodkan. Mid ka mid ah aaladahaas, oo badalaya buur ka mid ah iskubooriyaha aan loo baahnayn, waa shidaal. Wuxuu awoodaa inuu si dhakhso ah u caawiyo oo aan dadaal u galin inuu sameeyo shaqada gudaha, iyo dib u eegista iyo tayada tayada ee "caawiye" ayaa fududeyn doona doorashada saxda ah marka la iibsanayo.
Sida loo sameeyo majaajilada barafka guriga
Dad badan baa ku riyaaqaya xilliga jiilaalka iyagoo buste caddaan ah oo baraf ah. Inkasta oo uu ku faraxsan yahay xilliga jiilaalka uu keeno jinniyo badan, waqtigaani wuxuu sidoo kale la xiriiraa dhibaatooyin dheeraad ah: marka barafku aad u badan yahay, wuxuu adkeynayaa inuu u guuro dayrka oo ka baxo gaariga garaashka. Sidoo kale, barafka waa la xiri karaa albaabada albaabka guriga.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Qalabka 2019